Ukuhlola i-Galaxy yeSouth Africa
I-Small Magellanic Cloud yiyona nto ifunwa yinkwenkwezi yokubamba inkqantosi kubabonisi basemazweni asezantsi. Ngokwenene i-galaxy. Izazi zeenkwenkwezi ziluhlu njengoluhlobo olusisigxina lwegalaxy elingu-200,000 ukukhanya-iminyaka ukusuka kwi- Milky Way galaxy . Inxalenye yeQela laseKhaya lamagqabha angaphezu kwama-50 ahlanganiswe ngokukhawuleza kule ndawo yendalo yonke.
Ukuqulunqwa kweNcinci yeMagellanic
Ukuvavanya ukufundwa kweMigodi eNcinane kunye neMagellanic kubonisa ukuba bobabini bebonke bavinjelwe iindidi ezijikelezayo .Kodwa ixesha, nangona kunjalo, ukusebenzisana kunye neMilky Way kwaphazamisa imilo yabo, bahlukana.
Isiphumo sibini sesiganeko esingaqhelekanga esasetyenziswa kunye kunye neMilky Way.
Iipropati zeMagellanic Cloud encinci
I-Small Magellanic Cloud (SMC) ineminyaka engama-7 000 ekukhanyeni (ubuncinane malunga no-7% we-Milky Way ububanzi) kwaye iqulethe malunga nezigidi ezi-7 zezilwanyana zelanga (ngaphantsi kwepesenti enye yobunzima beMilky Way). Nangona i-half-size yobuqabane bayo, i-Large Magellanic Cloud, i-SMC iqulethe iinkwenkwezi ezininzi (malunga ne-7 billion ukuya kwezigidigidi ezili-10), oku kuthetha ukuba ine-stellar ephezulu.
Nangona kunjalo, isantya sokwakheka kweenkwenkwezi okwangoku sezantsi kwi-Small Magellanic Cloud. Oku mhlawumbi kuba inegesi engaphantsi kancinane kunobantwana bayo abakhulu, kwaye ngoko ke, babe nexesha lokuqulunqwa ngokukhawuleza kwixesha elidlulileyo. Liye lisetyenziselwa ininzi yegesi yalo kwaye ngoku liye lanciphisa ukuloba kwenkwenkwezi kule galaxy.
I-Small Magellanic Cloud ibuye ikude kakhulu kwababini.
Nangona kunjalo, kusengabonakaliswa ukusuka kummandla wasezantsi. Ukuze uyibone kakuhle, kufuneka uyihlolisise ngokucacileyo, isibhakabhaka esibumnyama ukusuka nasiphi na indawo esezantsi. Kubonakala ngokuhlwa kwezulu kususela ekupheleni kukaOktobha ukuya kuJanuwari. Uninzi lwabantu luphosa iMagellanic Clouds ngamafu esiphepho kude.
Ukufunyaniswa kweMagellanic Cloud enkulu
Bobabini amaMagellanic amakhulu kunye aMancinci aMabala aphezulu kwizulu lasebusuku. Igama lokuqala elibhalwe kwisimo sawo esibhakabhakeni laphawulwa yi-astronomer yasePheresi u-Abd al-Rahman al-Sufi, owayehlala kwaye egcinwa phakathi kwekhulu le-10.
Kwaye kwada kwaba ngama-1500s okuqala ukuba abalobi abahlukahlukeneyo baqala ukurekhoda ubukho bamafu ngexesha lokuhamba kwabo elwandle. Ngomnyaka we-1519, uFerdinand Magellan wazisa ekuthandweni ngaye. Igalelo lakhe ekufumaneni kwabo ekugqibeleni laholela ekubeni baqambe igama.
Nangona kunjalo, kwakungekho kude kube ngekhulu lama-20 ukuba izazi zeenkwenkwezi zazifumanisa ukuba iMagellanic Clouds yayineminye imilambo ehlukeneyo. Ngaphambi koko, ezi zinto, kunye nezinye iindawo ezinobungqingili esibhakabhakeni, zazicingwa ukuba zi-nebulae zodwa kwiGalaxy Way. Vala iziphumo zokukhanya ezivela kwiinkwenkwezi eziguquguqukayo kwiMigellanic Clouds zavumela i-astronomers ukuba zichane imida echanekileyo kulezi zidilesi ezimbini. Namhlanje, izazi zeenkwenkwezi zibafundela ubungqina benkwenkwezi, ukufa kweenkwenkwezi kunye nokusebenzisana ne-Milky Way Galaxy.
Ngaba i-Small Magellanic Cloud iya kudibana neGileky Way Galaxy?
Uphando lucebisa ukuba zombini iMagellanic Clouds iye yajikeleza i-Milky Way igalaxi malunga nendawo efana nengxenye ebalulekileyo yokuba khona kwayo.
Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukuba baye bahamba ngokusondeleyo njengendawo yabo yangoku.
Oku kuye kwabangela ezinye izazinzulu ukuba zicebise ukuba iMilky Way ekugqibeleni izitya ezincinane. Zineentengiso zegesi ye-hydrogen phakathi kwabo, kunye neMilky Way. Oku kunikeza ubungqina bokusebenzisana phakathi kwezi ntlobo ezintathu. Nangona kunjalo, uphando olusandul 'ulwaziso olunjengeeHibble Space Telescope lubonakala lubonisa ukuba le milalane ihamba ngokukhawuleza kwiindlela zazo. Oku kunokubenza bangabikho kwi-galaxy yethu. Oko akulawuli ukusebenzisana okufutshane kwixesha elizayo, njengoko i-Andromeda Galaxy ivala ngokubambisana kwexesha elide ne-Milky Way. Ukuba "umdaniso weendidi" uzakutshintsha imilo yazo zonke iindidi ezibandakanyekayo kwiindlela ezinqabileyo.
Iingcamango zeProjekthi yeSayensi yeNzululwazi: IPlanet Mars
Iintlanzi ezili-10 ezigqwesileyo kwi-Sky
Yintoni Ubunzulu beLwazi?
Iintlobo ezahlukeneyo zeengqungquthela